eSewa Festive Offers (2078) - eSewa
दशैँ, तिहार, छठ उत्सव आयो,
इसेवाले अफरको बहार ल्यायो!
यो दशैँ, इसेवाबाट कारोबार गरी पाउनुहोस् आकर्षक क्यासब्याक, FREE हवाइ return ticket देखि स्कुटर सम्म जित्ने मौका । उत्सवको माहोलमा इसेवाले आफ्नो ग्राहकहरुलाई टपअप, हवाइ टिकटिङ, Send Money, Bank Transfer देखि अन्य सेवामा उपहार नै उपहारको योजना ल्याएको छ । उपहार के छ त ? विस्तृत रुपमा यहाँ जान्नुहोस् ।
रु. १०० मा Yamaha Fascino 125 Fi
यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले मात्र रु. १०० बुझाइ एक जना भाग्यशाली ग्राहकले Yamaha Fascino 125 Fi स्कुटर आफ्नो बनाउन सक्नु हुनेछ । यसका साथै यस अफरमा सहभागी हुने ग्राहकहरूबाट १० जनाले रु ५,००० को शपिङ भौचर पनि जित्नु हुनेछ । अफरको विस्तृत जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
हवाइ टिकटिङमा स्कुटर
यस चाडपर्व कर्मथलोबाट जन्मथलो वा अन्य कुनै स्थानमा यात्रा गर्नका निमित्त इसेवाबाट हवाइ टिकट लिदा दैनिक ३ जनाले फर्किने टिकट FREE मा पाउनु हुनेछ । यो अफर १५ दिनका लागि लागु हुनेछ । यस अफरबाट योग्य ग्राहकहरुबाट १ जना भाग्यशाली विजेताले Yamaha Fascino 125 Fi पनि जित्ने मौका रहेको छ । अफरको विस्तृत जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
नि: शुल्क बैंक ट्रान्स्फर
चाडपर्वको माहोललाई ध्यानमा राख्दै इसेवाले असोज १९ देखि असोज ३१ सम्मका लागि इसेवाबाट बैंकमा रकम ट्रान्स्फर गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
इसेवाबाट दैनिक कुनै न कुनै वित्तिय कारोबार जस्तै मोबाईल टपअप, विद्यूतको बिल भुक्तानी, खानेपानीको बिल भुक्तानी, टि. भि., ईन्टरनेटको बिल भुक्तानी, Scan & Pay आदि गर्दा साप्ताहिक रुपमा एक जना ग्राहकले उपहार पाउनु हुनेछ । साप्ताहिक उपहारमा Rice Cooker, Speaker, Microwave Oven, Refrigerator, आदि रहेका छन् ।
यस अफरमा ग्राहकहरुले दैनिक रुपमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी NTC, Ncell वा Smart नम्बर न्युनतम रु. १०० को टपअप गर्दा वा NTC, Ncell डाटा प्याक खरिद गर्दा १०% क्यासब्याक (रु. ५० सम्म) पाउनु हुनेछ ।
यस अफरमा इसेवा ग्राहकहरुले “Digital Dakshina” सेवा प्रयोग गरी इसेवाबाट इसेवामा न्युनतम रु. १०० पठाउदा ५०० भाग्यशाली ग्राहकले इसेवामा रु ५०० ब्यालेन्स पाउनु हुनेछ । यो अफर असोज महिनामा विजया दशमी (टिका) को दिन देखि कोजाग्रत पुर्णिमा सम्म र कार्तिक महिनामा भाईटिकाको दिन गरी ७ दिनका लागि लागु हुनेछ ।
Posted on October 3, 2021 October 5, 2021 by Rukshana Ali
13 thoughts on “eSewa Festive Offers (2078)”
Shaima’ kunwar chhetri says:
Using for every transaction
Such as : groceries, banking and airlines
Suresh kapar says:
when will you published the result of 100 ma facsino scooty 125 fi
Winners will be announced on Kartik 15, 2078.
Most good app in nepal ❤
Number. 1 app of Nepal ❤🇳🇵
Rs 100 ma fascino
luck lay f—- garay jasto cha khoi ahlay samma kehi nai paray ko chaina……lets c
😂😂maile k he bujhena kasri coupon paoune ani kasri jeetne yamaha ko scooter 😅😅
Hope to bring you on home
I m allso try